जिब्रो थुन्ने दुईतिहाईको बिधेयक « Postpati – News For All
दुइतिहाइले विधेयक पास गरेपछि मुलुकभरी लाखौं जेलहरु निर्माण हुनेछन
लक्ष्मण चौलागाईं 'विद्रोही' पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
हिजो सुनेको र हिजो बजाइएको गीत आजभोली टेक्नोमा परिमार्जन एवम अनुवाद भएको छ। हिजो गाउगाउमा सिंहदरबार भनेर नारा लगाउदा नै मैले भनेको थिएं । यो मिथ्या हो। यो त मात्रै वेवकुफ भ्रम हो, बरु गाउगाउमा भैरवनाथ गणहरु चाहिँ बन्दैछन भनेर । त्यतिनैबेला मैले विभिन्न अनलाइन न्युज मिडियाहरुमा आलेख नै लेखेको थिएं । सायद मेरा आदरणीय मित्रहरूले पनि पढ्नुभयो होला। म वर्तमानमा टेकेर भविस्यको भाषा बोल्छु । आजसम्म झन्डै ८०% मिलेको छ, फेल खाएको छैन।
यसैकारण तिनै भैरवनाथ गणका पूर्व संकेतको चाल पाएर मैले संसदीय निर्वाचन बहिस्कार गरेको थिएं र आज म गौरव गर्छु । मेरो मत बलात्कृत हुन पाएन। त्यसैले आफैलाई धन्य ठानेको छु ।
मुलुकको इतिहास रगतको खोली बगाएर बदलिएको सत्य हरेक घरका मानिसहरुलाई थाहै छ तर अनुभूति परिवर्तनको हुन पाएन बरु अधिनायकवाद लाद्ने प्रपन्चको दुर्गन्ध भने हरक्कै आइसकेको छ ।
चार वर्ष पहिला मात्रै ३४ लाख युवायुवती बिदेशिएका थिए भने चार वर्षपछिको तथ्यांकले ८० लाख युवाशक्तिलाई खाडी लगायतका विश्वका विभिन्न मुलुकतिर लखेटिसकेको छ र यो क्रम तिब्र छ। यसैकारण समृद्दी लज्जित भएकी छे। विकास छक्क परेर घोसेमुन्टो लगाइरहेको छ आदरणीय साथीहरू ।
मलाई जस्तो सुकै सजायको कुनै परवाह लाग्दैन । जन्मेपछी मर्नु पर्छ जुन सत्य हो । तर कसरी मरिन्छ त्यो त भविष्यले नै जगजाहेर गर्ला । यसैले मैले गणतन्त्रमा बोल्छु यद्यपि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनु किन नपरोस । सिन्धु आमाको गर्भवाट जन्मेको म, सिन्धु नदिको जलप्रवाहमा हुर्केको म, आमा सरस्वतीको छोरो हुं। अन्याय र अत्याचार किमार्थ सहिदैन, बरु सजाएको अचानोमा जिबनको अन्त्यष्टि स्विकार्न तयार छु ।
हजारौको रगतको खोली बगाएर मुक्तिको उदघोस गरेको जनयुद्धले गणतन्त्र त ल्यायो, गणतन्त्र पनि लक्का जवान भैसक्यो। हिजोको १०४ वर्षीय राणा शासन निरंकुश थियो, बोल्न लेख्न नपाइने प्रावधान थियो । अब आज बोल्न र लेख्न नै नपाउने विधेयक बनाउछ कथित सरकारले भने सोध्नु मन लाग्यो खड्ग सरकारलाई एउटा अनमोल प्रश्न ;”सरकार अब किन खोल्ने शिक्षण संस्थाहरु ? कलेज, युनिभर्सिटी, स्कूलहरु ? अब बन्द गरौं त्यसपछी बोल्नलेख्न नपाउने विधेयक संसदबाट अनुमोदन गरौं न हुदैन ?
यो गणतन्त्र नै होइन र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हैन भने त्यस्ता विधेयक गरिबको घरवास उठाउने १५ लाखे कानुन र ५ वर्षे जेलको नियम तर्जुमा गर्न अब भएका युनिभर्सिटी, कलेज साथै स्कूलहरुलाई नै जेलमा रुपान्तरण गरौं न हुदैन र सरकार ? त्यसपछि सुन्दै लाज लाग्ने विधेयक पास गरौं न ।
तिनै ८० लाख युवाको पसिनाले बनाउं लाखौं जेलहरु र थुनौं मुक्तिको भ्रम फैलाएका नेपाली जनताका छोराछोरीहरुलाई अन्धकार खोरमा । त्यसपछि अधिनायकवादको आयु ५० वर्ष हैन फेरि राणा शासकहरुको जस्तै १०४ वर्ष भन्दा बढि टिक्न पाउनेछ र चलाउँ अन्धकार शासन जसले शासकको सुदिन ल्याई दिर्घायु प्राप्त हुनेछ। हजारौंको रगत लिलाम भएको मुलुकमा लाखौं युवाको पसिना बल्ल पच्न पाउनेछ।